ဒူဒူကြီး: “Anti-fouling Paint Systems”
အခွံမာရေသတ္တဝါ barnacles, ပင်လယ်ရေညှိရေမှော် algae နဲ့ အခွံပျော့ရေသတ္တဝါ molluscs ဆိုတဲ့ အဏ္တွဝါ အဏုဇီဝတွေ ‘fouling organisms’ အနေနဲ့ သဘေ်ာရဲ့ hull မှာ၊ တွယ်ကပ်ငြိတွယ်နေခြင်း၊ မရှိမှသာ သဘေ်ာဟာ၊ ရေထဲမှာ၊ travel faster အဖြစ်လျှင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်ပြီး၊ ‘လောင်စာ’ အသုံးပြုမှာမှာလည်း less fuel အနေနဲ့ လျှော့နည်း ကျဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ သဘေ်ာ hull ရဲ့ သုတ်ဆေး coating အဖြစ်၊ ထုံး lime, အာဆင်းနစ်ဒြပ်နှော later arsenical တွေနဲ့ မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း mercurial compounds တွေကို၊ အသုံးပြုပြီး အဏ္တွဝါအဏုဇီဝတွေ တွယ်ကပ် ငြိတွယ်ခြင်းမှ၊ ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Fig. barnacles, sea algae and mollusca
(၁၉၆၀) ခုနှစ်အလွန် ကာလတွေမှာ ဓါတုကုန်ထုတ်ဆိုင်ရာ chemicals industry နည်းပညာတွေ တိုးတက် လာတာနဲ့အမျှ၊ သတ္တုဒြပ်ပေါင်း metallic compounds တွေကို၊ အခြေခံကာ၊ ထိရောက်မှု efficacious ရှိပြီး၊ cost-effective အနေနဲ့ ဈေးနှုံးလည်းသက်သာတဲ့ DDT - dichloro dithenyl trichloroethane တွေကို၊ anti-fouling paints သုတ်ဆေးတွေမှာ၊ ထည့်သွင်းအသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (၁၉၇၀) ခုနှစ်မှ စပြီး anti-fouling paints ထုတ်လုပ်ရာမှာ၊ ‘TBT’ လို့ခေါါါတဲ့ ‘tributylin compounds’ တွေကို၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
tributylin compound တွေဟာ၊ ‘organotin compounds’ တနည်းအားဖြင့် ‘stannanes’ လို့ခေါါတဲ့ သံဖြူနဲ့ ရောစပ်ထားတဲ့ ဟိုက်ဒြိုကာဘွန်အုပ်စုဝင် tin with hydrocarbon substituents ဒြပ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တုဒြပ်ပေါင်း metallic compounds ဖြစ်တဲ့ ‘TBT’ ကို၊ ‘organotin compounds’ အဖြစ်၊ သုတ်ဆေးတွေ ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း persist နဲ့ ရေထဲမှာ ပျော်ဝင်ပြိုကွဲခြင်း sediments တို့မှ တဆင့်၊ ရေနေသက်ရှိ sealife တွေအသက်ဆုံးရှုံးစေခြင်း killing နဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှုဘဝ ပြောင်းလဲစေခြင်း food change အစရှိတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီး ယိုယွင်းမှုတွေ၊ ပေါါပေါက်လာနိုင်တာကို သုသေသနပြုချက်တွေအရ၊ တွေ့ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။
Fig. Neurotoxins in shark fins
ဥပမာ ကမာကောင် oysters တွေရဲ့ အခွံမှာ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ယွင်းမှု shell deformations တွေပေါါပေါက်လာခြင်း၊ whelks လို့ခေါါတဲ့ ပင်လယ်ခရုတွေမှာ လိင်ပြောင်းလဲမှု imposex တွေဖြစ်ပေါါလာခြင်း၊ immune response လို့ခေါါတဲ့ ခုခံအားစနစ်တွေ ပြောင်းလဲသွားခြင်းတို့အပြင်၊ ရေနေသက်ရှိ marine species တွေရဲ့ အာရုံကြောစနစ် အဆိပ်သင့်မှု ‘neurotoxic’ နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပျက်စီးယိုယွင်းမှု ‘genetic affects’ တို့ဟာ၊ TBT လို့ခေါါါတဲ့ ‘tributylin’ compound တွေကို၊ အသုံးပြုထားတဲ့ anti-fouling သုတ်ဆေးတွေကြောင့် ပေါါပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနေ သက်ရှိတွေကို စားသုံးတဲ့ လူသားတွေမှာလည်း၊ အာရုံကြောစနစ်အဆိပ်သင့်မှုနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေဟာ၊ ရောဂါတမျိုးအနေနဲ့ ကူးစက်နိုင်ခြင်းကို၊ တွေ့ရှိလာပါတယ်။
(၁၉၈၈) ခုနှစ်မှာ MEPC လို့ခေါါတဲ့ IMO ရဲ့ ‘Marine Environment Protection Committee’ မှ၊ အသုံးပြုထားတဲ့ anti-fouling paints တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ သဘေ်ာသွားလာ ခုတ်မောင်းရာမှာ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး safety of shipping နဲ့ ရေပြင်ညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်တားဆီးရး prevention of marine pollution အတွက်၊ အလေးအနက်ထားလာခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ်မှာတော့၊ anti-fouling paints တွေမှာ၊ ပါဝင်နေတဲ့ 'TBT' ပမာဏအား၊ စတင်တိုင်းတာခဲ့ပြီး၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးအချက်အလက် environmental issues အနေနဲ့ anti-fouling systems တွေကို၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၉၉) ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ၊ harmful effects အဖြစ်၊ ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ anti-fouling paints တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ assembly resolution အဖြစ်၊ စုဝေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ (၂၀၀၁) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာတော့ 'International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships' ဆိုတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အရ၊ anti-fouling systems မှာ၊ ‘harmful substances’ တွေကို၊ ထည့်သွင်း အသုံးပြုမှုမှတားဆီးရန်၊ နည်းပဒေ regulation ကို၊ ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း IMO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးဟာ၊ (၂၀၀၈) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ၊ စတင်ပြီး၊ 'International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships' ဆိုတဲ့ နည်းဥပဒေကို၊ အပြည့်အဝလိုက်နာရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
ရေနဲ့ ထိတွေ့နေမယ့် သဘေ်ာရဲ့ ကိုယ်ထည် hull မှာ၊ အဏ္တွဝါအဏုဇီဝသက်ရှိတွေ တွယ်ကပ်ငြိတွယ်နေခြင်းကို၊ anti-fouling system အသုံးပြုပြီး၊ မတားဆီးနိုင်ခဲ့လျှင်၊ (၆) လတာ ကာလအတွင်း၊ (၁) စတုရန်းမီတာမှာ (၁၅၀) ကီလိုဂရမ်နှုံးဖြင့် fouling တွေ၊ ကပ်ငြိပွားများလာနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားပြီး၊ ရေနဲ့ ထိတွေ့နေမယ့် underwater areas ပမာဏ၊ စတုရန်းမီတာ (၄၀, ၀၀၀) ရှိတဲ့ ရေနံစိမ်းတင် crude oil carrier သဘေ်ာတစီးမှာ၊ anti-fouling system ကို အသုံးမပြုခဲ့လျှင်၊ (၆) လအတွင်း တန် (၆, ၀၀၀) ခန့်ရှိတဲ့ fouling တွေ ကပ်ငြိနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Fouling explain
သေးငယ်တဲ့ပမာဏဖြင့် fouling တွေ၊ စတင်ကပ်ငြိတာနဲ့ လောင်စာသုံးစွဲမှုနှုံးထား fuel consumption ဟာ၊ (၄၀) % အထိ၊ ပိုမိုမြင့်တက်သွားနိုင် ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာ resistance to movement အဖြစ်၊ သဘေ်ာ သွားလာ ခုတ်မောင်းနှုံးကိုလည်း (၅၀) % အထိ၊ ကျဆင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ effective anti-fouling system ကို၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ သဘေ်ာ သွားလာခုတ်မောင်းနှုံးဟာ၊ တသမတ်တည်း ရှိနေမှာဖြစ်သလို၊ လောင်စာသုံးစွဲမှု နှုံးထားကိုလည်း အနည်းဆုံး အခြေအနေမှာ၊ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
effective anti-fouling system ရရှိစေရန်၊ 'biocide' လို့ ခေါါပြီး၊ harmless အနေနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေမယ့် ‘chemical substance’ တွေကို၊ ရောစပ်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ 'biocide' ဟာ၊ ရေရှည် အသုံးခံခြင်း broad spectrum activity, အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပေါါမှု နည်းပါးခြင်း low mammalian toxicity, low water solubility ရေထဲမှာ အလွယ်တကူ၊ မပျော်ဝင်နိုင်ခြင်း low water solubility, ရေနေသက်ရှိတွေရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ ဇီဝဖြစ်တည် ရောနှောမှု မပေါါပေါက်နိုင်ခြင်း no bioaccumulation in the food chain, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ဆန့်ကျင်မှုမဖြစ်ပေါါခြင်း not persistent in the environment, သုတ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ အလွယ်တကူ ရောစပ်နိုင်ခြင်း compatible with paint raw materials နဲ့ ဈေးနှုံးအရ သက်သာပြီး၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း favourable price/ performance အစရှိတဲ့၊ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Biocide (dispersed inaresinous matrix)
ယေဘုယျအနေနဲ့ anti-fouling system အတွင်းမှ biocides တွေဟာ၊ ရေထဲမှာ freely leaches အနေနဲ့ လွယ်ကူစွာစိမ့်ဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ initial release အဖြစ်၊ လျှင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနှေးသွားကာ၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ ကုန်ခမ်းသွားပါတယ်။
Self-polishing paints - (၁၉၈၀) ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ကာလတွေမှာ၊ self-polishing paints ဆိုတဲ့ anti-fouling paints တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုခဲ့ကြ ပါတယ်။ self-polishing paints တွေဟာ၊ ‘polymer base organotin compounds’ တွေဖြစ်ပြီး၊ biocide ရဲ့ အလွယ်တကူစိမ့်ဝင်ပြိုကွဲမှုကို၊ ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သုတ်ဆေးရဲ့ surface layer အပေါါ၊ seawater reaction သက်ရောက်မှသာ၊ ရေထုအတွင်း biocide စိမ့်ဝင်မှုဖြစ်ပေါါတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Copolymer system anti-fouling paint
သုတ်ဆေးအလွှာ paint layer တခုနဲ့အတူ biocide လည်း leaches အနေနဲ့ စိမ့်ဝင်ကုန်ခမ်းသွားပြီး၊ နောက်ထပ် သုတ်ဆေးအလွှာ အလွှာတခုမှာတော့ biocides ဟာ၊ anti-fouling အဖြစ်၊ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ biocide ရဲ့ leaching rate နှုံးထားဟာ၊ သုတ်ဆေးရဲ့ သက်တမ်းအတိုင်း၊ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကာလအားဖြင့် လပေါင်း (၆၀) ခန့်အထိ၊ သက်တမ်းရှိနေနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး 'self-polishing paints' အဖြစ် TBT ကို biocide အဖြစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့၊ 'copolymer system anti-fouling paint' တွေကို၊ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
fungicide, bactericide, insecticide နဲ့ wood preservative တွေကို၊ biocide အဖြစ်အသုံးပြုရာမှာ၊ aquatic organism တွေဖြစ်တဲ့ microalgae, molluscs, crustaceans နဲ့ ငါး အစရှိတဲ့ ရေနေသတ္တဝါတွေ၊ ထိခိုက်ပေမယ့်၊ TBT biocide ဟာ၊ ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပေါါစေတဲ့ ‘most toxic substance’ ဖြစ်ပါတယ်။ TBT ကို biocide အဖြစ်၊ 'self-polishing paints' တွေမှာ စတင်အသုံးပြုကတည်းက၊ ရေထုအတွင်း contamination အနေနဲ့ ရောနှောပါဝင်မှုဖြစ်ပေါါနေမယ့် ပမာဏကို၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ TBT accumulation ဟာ၊ ရေထုအတွင်းမှာ ပျော်ဝင်မှုမရှိပဲ၊ ငါးအပါအဝင် ရေနေနို့တိုက်သတ္တဝါ mammals တွေထံသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းမှသာ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
Fig. Tributyltin (TBT) hydride model
TBT ဟာ ရေထဲမှာ အလင်းရောင်သက်ရောက်မှု influence of light ဖြစ်ပေါါတဲ့အခါ၊ ‘photolysis’ အနေနဲ့ အလွယ်တကူ ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြိုကွဲသွားတဲ့ TBT compounds တွေဟာ ရေထဲမှ အဏုဇီဝ micro-organisms တွေအပေါါ၊ ဇီဝအဆင့်နိမ့်အသွင်ပြောင်းလဲမှု ‘biodegradation’ ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ less toxic di-butyltin နဲ့ mono-butyltin ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်၊ တည်ရှိနေစေပါတယ်။ ‘biodegradation’ ဖြစ်ပေါါနေတဲ့ အဏုဇီဝတွေမှ တဆင့် decomposition အနေနဲ့ စုပုံကာ၊ sediment ဆိုတဲ့ အနည်အနှစ်တွေ၊ ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ oxygen လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်တဲ့ ရေအောက်နေရာတွေမှာ၊ ‘heavily sedimented bottoms’ အနေနဲ့ စုပုံဖွဲ့တည်နေပြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Fig. Tributyltin (TBT) - harmful effects on the environment
(၁၉၉၀) ခုနှစ်မှာတော့ Resolution MEPC 46 (30) ဆိုတဲ့ 'Measures to Control Potential Adverse Impacts Associated with Use of Tributyl Tin Compounds in Anti-Fouling Paints' နည်းဥပဒေကို၊ MEPC လို့ခေါါတဲ့ IMO ရဲ့ ‘Marine Environment Protection Committee’ မှ၊ စတင်ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ Resolution MEPC 46 (30) အရ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ အလျှား (၂၅) မီတာနဲ့အောက်၊ non-aluminium hulled vessels သဘေ်ာတွေမှာ၊ anti-fouling paint အဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ့ TBT ပါဝင်မှုကို၊ တိုင်းတာ အကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ average leaching rate အနေနဲ့ TBT per cm2 ဧရိယာမှာ၊ တနေ့ကို4microgrammes နှုံးဖြင့် ပျော်ဝင်ခြင်းရှိမရှိ၊ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
‘Resolution MEPC 46 (30)’ ဟာ IMO ရဲ့ ‘interim measures’ အနေနဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာ၊ အကဲဖြတ်မှုဖြစ်ပြီး၊ anti-fouling paints တွေရဲ့ TBT compounds ပါဝင်မှုကို၊ total prohibition အနေနဲ့ တာဆီးရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလည်း၊ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၉၂) ခုနှစ်မှာတော့ 'UNCED 1992' လို့ခေါါတဲ့ ‘1992 Rio Conference on Environment and Development’ ဆိုပြီး၊ anti- fouling issue ကိစ္စရပ်တွေကို၊ အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြသလို၊ Chapter ‘17’ of Agenda ‘21’ အရ၊ anti-fouling systems မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ organotins compounds တွေမှ တဆင့် ဖြစ်ပေါါလာမယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု pollution အား၊ လျှော့ချရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှ၊ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၉၉၀) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကာလတလျှောက်လုံး၊ ‘MEPC’ ဟာ၊ TBT monitoring study အနေနဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ၊ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ TBT marine organisms တွေအပေါါ၊ TBT compounds တွေရဲ့ အဆိပ်အတောက် သက်ရောက်မှုကို၊ reconfirmed အနေနဲ့ သေခြာစွာ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ သုတ်ဆေးတွေနေရာမှာ၊ existing alternative anti-fouling systems အဖြစ်၊ အစားထိုးနိုင်စေရန်၊ ထိရောက်မှု effectiveness နဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှု risk posed တွေအပါအဝင်၊ အချက်အလက် information တွေကို၊ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၈) ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာတော့ ‘MEPC’ ဟာ၊ ‘draft Assembly resolution’ အနေနဲ့ (၂၀၀၈) ခုနှစ်မှစပြီး၊ anti-fouling systems အတွင်း biocides အဖြစ်၊ TBT organotin compounds ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုကို၊ လုံးဝတားဆီးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
‘TBT organotin compounds’ ကို၊ biocides အဖြစ် အသုံးမပြုတဲ့ ‘alternative organotin compounds’ တွေကို၊ (၁၉၉၀) ခုနှစ်ခန့်မှစတင်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ non-aluminium hulls သဘေ်ာတွေမှာ၊ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် anti-fouling systems မှာ biocides အဖြစ်၊ TBT organotin compounds ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုကို၊ လုံးဝတားဆီးရန် မဆုံးဖြတ်ခင်ကတည်းက၊ TBT free anti-fouling system သုတ်ဆေးတွေကို နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ၊ စတင်အသုံးပြုလာကြတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ‘TBT organotin compounds’ ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုကို၊ လုံးဝ အသုံးမပြုရန်၊ တားဆီးမယ့် ကာလမတိုင်မှီ အတွင်း၊ TBT free anti-fouling system တွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနဲ့ အရည်အသွေးတွေ၊ တိုးတက်လာလာသလို၊ ဈေးနှုံးအရလည်း သက်သာကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။
Fig. TBT free anti-fouling systems
TBT free anti-fouling systems အတွက်၊ ရေထဲမှာ ပျော်ဝင်သွားနိုင်မယ့် seawater soluble matrices တွေကို၊ ‘tin-free biologically activeingredients’ တွေအဖြစ်၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။ biocides တွေဟာ၊ chemically bonded အဖြစ် ဖွဲ့စည်းနေခြင်းမရှိပဲ၊ 'matrix' အနေနဲ့သာ၊ အလျှားလိုက်နဲ့ဒေါင်လိုက် အနေအထားဖြင့်၊ ကျယ်ပြန့်စွာနေရာယူပြီး၊ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကာလကြာလာတိုင်း ရေနဲ့ သုတ်ဆေးတို့ ထိတွေ့မှုကြောင့် seawater/ paint interface အတွင်းမှာ၊ biocide ဟာ၊ controlled rate နှုံးထားတခုဖြင့်၊ ပျော်ဝင်ပြိုကွဲသွားပါတယ်။ matrix dissolves အနေနဲ့ ပျော်ဝင်သွားတိုင်း၊ ဆေးသားအလွှာမှာ biocide အသစ်တွေ ထပ်မံပါါပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
hull fouling ကိုသာ၊ မထိမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့လျှင်၊ သဘေ်ာရဲ့ကိုယ်ထည်မှာ၊ potential corrosion တွေ ပေါါပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန် (၂) နှစ်ခွဲနဲ့ (၃) နှစ် ကာလတိုင်းမှာ၊ သဘေ်ာကို ပုံမှန် dry-docking တင်ကာ၊ ဆေးသားအသစ် သုတ်ခြင်းဖြင့် ‘potential corrosion’ ဖြစ်ပေါါလာနိုင်မှုကို၊ တာဆီးရာမှာ၊ ‘TBT free anti-fouling system’ ဆိုတဲ့ alternative anti-fouling system အပြင်၊ ‘anti-corrosive paint system’ ကို၊ အပေါါယံအလွှာအဖြစ်၊ ထည့်သွင်း အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ alternative anti-fouling systems ကို ‘organotin-free system’ လို့လည်း၊ ခေါါနိုင်ပါတယ်။
အချို့ alternative anti-fouling systems တွေဟာ၊ co-polymer system anti-fouling paint တနည်းအားဖြင့် TBT အသုံးပြုထားတဲ့ organotin-based systems ကဲ့သို့၊ သက်တမ်း (၅) နှစ်ခန့်အထိ၊ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ alternative anti-fouling system တွေကတော့ copper-based antifouling paints, tin-free anti-fouling paints, non-stick coatings, natural resistance - natural biocides နဲ့ prickly coatings ဆိုတဲ့ သုတ်ဆေးတွေနဲ့ hull cleaning အပါအဝင် electricity ဆိုတဲ့ သဘေ်ာကိုယ်ထည်နဲ့ ရေထုကြားမှာ လျှပ်စီးမှုဖြစ်ပေါါစေခြင်း၊ တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။
alternative anti-fouling system တွေကို၊ အသုံးပြုပေမယ့် alternative biocides တွေကြောင့်၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် unknown environmental risks တွေနဲ့ boicides ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်ပေါါမှု metabolites ကိုလည်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် လိုအပ်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ hull မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ 'anti-fouling systems time line' ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ၊ (၁၉၀၀) ခုနှစ်မှ၊ (၁၉၆၀) ခုနှစ်အထိ၊ 'resin' လို့ခေါါပြီး၊ သစ်ပင်တွေမှ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ သစ်စေး 'hydrocarbon secretion' တွေနဲ့ 'pitch' လို့ခေါါတဲ့ ရေနံချေးတို့ကို၊ anti-fouling agent အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာ တွေ့ရသလို၊ စနစ်တကျ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု measures taken မဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ environmental impacts အနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်ကျင် ထိခိုက်မှုကို၊ မဖော်ပြနိုင်ခဲ့တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ (၁၉၆၀) ခုနှစ်မှာတော့ mercury oxide နဲ့ arsenic halogen compounds တွေ ပါဝင်တဲ့ 'copper-based paints' တွေကို၊ အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ 'long-life anti-fouling paint' အဖြစ်၊ အချိန်ကာလ (၂၄) လခန့်အထိ၊ ခံနိုင်ရည်သက်တမ်း ရှိတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
(၁၉၇၀) ခုနှစ်ကာလတွေမှာတော့ ‘free association TBT - based anti-fouling paints’ တွေကို၊ self-polishing anti-fouling paints အဖြစ်၊ အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ သဘေ်ာမောင်းနှင်တဲ့အခါ seawater နဲ့ paint တို့ပွတ်တိုက်တိုင်း၊ anti-fouling toxin တွေကို၊ ထုတ်လွှင့်ပြီး ‘fouling organisms’ တွေ ကပ်ငြိခြင်းမှ၊ တားဆီးပေးပါတယ်။ သုတ်ဆေး အလွှာတိုင်းမှာ layer by layer အနေနဲ့ anti-fouling toxin တွေကို၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကာလ (၅) နှစ်ခန့်အထိ၊ ခံနိုင်ရည်သက်တမ်း ရှိတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
(၁၉၈၀) ခုနှစ်မှစတင်ပြီး၊ self -polishing co-polymer TBT based anti-fouling paints တွေကို၊ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကမာကောင် oysters တွေရဲ့ အခွံမှာ ပုံသဏ္ဍန်ပျက်ယွင်းမှု shell deformations တွေပေါါပေါက်လာခြင်းကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ၊ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ TBT ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး side-effects အဖြစ်၊ သံသယရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Fig. Shell deformities in ‘macoma balthica’ and imposex in ‘dog whelks’
အလားတူ အဂ်လန်ကမ်းခြေ 'english coastal waters' တလျှောက်မှာလည်း၊ ပင်လယ်ခရု whelks တွေမှာ လိင်ပြောင်းလဲမှု imposex ဖြစ်ပေါါလာခြင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသလို၊ နိုင်ငံတော်တော်များများမှ အလျှား (၂၅) မီတာအောက် သဘေ်ာတွေရဲ့ anti-fouling paints တွေမှာ၊ TBT ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုအား တားဆီးခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၉၀) ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ၊ အရွယ်အစားသးငယ်တဲ့ သဘေ်ာတွေရဲ့ anti-fouling အဖြစ်၊ 'non-stick coating paints' တွေကို၊ စတင်အသုံးပြုလာကြသလို၊ tin-free alternatives anti-fouling paints အမျိုးအစားပေါင်းများစွာလည်း၊ ပေါါပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
‘IMO Resolution MEPC 46 (30)’ ကို၊ စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး၊ Japan, New Zealand နဲ့ Australia နိုင်ငံတွေမှာ၊ anti-fouling paints တွေအတွင်း၊ TBT ထည့်သွင်း အသုံးပြုမှုအား တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ TBT ကြောင့် dog whelks တွေမှာ၊ imposex ဖြစ်ပေါါလာခြင်းကို၊ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး၊ United States, Canada, Sweden နဲ့ Netherlands နိုင်ငံတွေမှာ၊ TBT ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှု လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ TBT release rate restrictions တွေကို၊ ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်မှာတော့ IMO ဟာ၊ harmful effects of anti-fouling paints ဆိုတဲ့ MEPC working group ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၇) ခုနှစ်မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ၊ TBT-based anti-fouling paints ထုတ်လုပ်မှုအား၊ လုံးဝတားမြစ် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၉၈) ခုနှစ်မှာ IMO ဟာ ‘MEPC draft mandatory regulations’ ကို ပြဌာန်းခဲ့ပြီး၊ အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား time scale တခု၊ သတ်မှတ်ကာ၊ anti-fouling systems အတွင်း organotins ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုအား၊ ရပ်ဆိုင်းရန် သဘောတူခဲ့ကြသလို၊ (၁၉၉၉) ခုနှစ်မှာတော့ IMO 21st Assembly မှ biocides ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းရန် အချိန်ကာလနှစ်အပိုင်းအခြားကို၊ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၁) ခုနှစ်မှာ ‘International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships 2003 Date for prohibiting application of organotin' ဆိုတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ diplomatic conference ကို၊ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၃) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၈) ခုနှစ်အတွင်း၊ prohibiting application ကာလအဖြစ်၊ ယာယီအသုံးပြုခွင့် ပေးထားခဲ့ပြီး၊ (၂၀၀၈) ခုနှစ်မှာတော့ anti-fouling systems အတွင်း၊ biocides ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုအား၊ ရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။
Alternative anti-fouling systems – ‘copper-based anti-fouling paints’ တွေကို၊ TBT သုံးထားတဲ့ ‘anti-fouling paints’ တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ ‘aquatic environment’ မှာ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပေါါမှု နည်းပါးတဲ့ less toxic compounds ဖြစ်ပေမယ့်၊ ‘marine fauna’ လို့ခေါါတဲ့ ရေနေအဏုဇီဝ သက်ရှိသတ္တဝါတွေနဲ့ အပင်တွေကို၊ ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အတွက်၊ အသုံးပြုမှုအား လုံးဝရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 'tin-free anti-fouling paints' တွေဟာ၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေပေမယ့်၊ (၆) လလောက် ကြာတဲ့အခါ၊ fouling တွေ စတင်တွယ်ကပ် လာတတ်တဲ့အတွက်၊ အချိန်ကာလ အချိန် (၂) နှစ်ခွဲနဲ့ (၃) နှစ် ကာလတိုင်းမှာ၊ သဘေ်ာကို ပုံမှန် dry-docking တင်ကာ၊ ဆေးသား အသစ်သုတ်ရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
‘non-stick coatings’ ကိုတော့ minimum speed 30 knots နဲ့ အထက်မြန်နှုံးမြင့်တဲ့ ရေယာဉ်တွေမှာသာ၊ အသုံးပြုရန်သင့်လျှော်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ hull ဟာ၊ ပြောင်ချောတဲ့ ‘extremely slippery surface’ အနေနဲ့ရှိနေပြီး၊ fouling တွေအလွယ်တကူ၊ ကပ်ငြိခြင်းမရှိနိုင်ပေမယ့် ဆေးသွားလွှာပျက်စီးမှု coating damage ဖြစ်ပေါါခဲ့လျှင်၊ ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ rotating brushes တွေနဲ့ high-pressure hoses တွေအသုံးပြုကာ သဘေ်ာရဲ့ hull ကို ရေထဲမှာ၊ အချိန်မှန် ‘periodic cleaning’ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ marine organisms တွေခွာချခြင်းကိုလည်း၊ alternative anti-fouling systems အဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သဘေ်ာရဲ့ hull မှာ natural resistance တနည်းအားဖြင့် natural biocides ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ corals ဆိုတဲ့ သန္တာကျောက်ခက်တွေနဲ့ sponges ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ရေမြှုတ်တွေကဲ့သို့ ‘fouling’ ကပ်တွယ်မှုကို၊ သဘာဝအလျှောက်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ natural biocides အဖြစ် natural compounds တွေကို အသုံးပြုရာမှ၊ သက်ရှိဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ရရှိစေရန် ‘active metabolites’ တွေဖြစ်တဲ့ ceratinamine နဲ့ mauritiamine တွေကို၊ synthesised အနေနဲ့ အချိုးကျချိန်ညှိစေရန်၊ ထည့်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။
Fig. Hydrophilic coatings
first phase of fouling's growth အနေနဲ့ အဏုဇီဝတွေ စတင်တွယ်ကပ်စဉ်မှာ၊ natural resistance အဖြစ် 'enzymes' တွေကိုထုတ်ပေးပြီး၊ သဘာဝအလျှောက်တားဆီးခြင်းဖြစ်ကာ၊ natural biocides ဖြစ်ပေါါမှုမှတဆင့် သဘာဝအလျှောက် တားဆီးခြင်းကို 'hydrophilic coating' လို့ ခေါါပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ‘hydrophilic materials’ တွေဟာ၊ ‘hydrophobic materials’ သို့မဟုတ် water repelling substances တွေဖြစ်ပါတယ်။ hydrophilic ဆိုတာကတော့ ရေနဲ့သဟဇာတဖြစ်မယ့် ‘water loving materials’ တွေဖြစ်တဲ့၊ silicone နဲ့ wax တို့ကို၊ အသုံးပြုထားတဲ့ alternative anti-fouling systems ဖြစ်ပါတယ်။
hull နဲ့ sea water တို့အကြားမှာ၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် electrical charge မှတဆင့် unleashes chemical process အနေနဲ့ fouling ဖြစ်ပေါါမှုကို တားဆီးကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းကိုလည်း၊ alternative anti-fouling systems အဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ် electricity ကို အသုံးပြုထားတဲ့ anti-fouling systems နည်းလမ်းဟာ၊ tin-free paint တွေကို အသုံးပြုခြင်းထက်၊ ပိုမိုထိရောက်ပေမယ့် ကနဦးတတ်ဆင်မှု ကုန်ကျစားရိတ် initial installation cost မြင့်မားသလို၊ အလွယ်တကူပျက်စီးချို့ယွင်းမှု easily damaged ဖြစ်ပေါါနိုင်ပြီး၊ corrosion နဲ့ energy consumption မြင့်တက်လာမှုတွေရှိတတ်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. Microscopic prickles
'microscopic prickles' တွေအသုံးပြုထားတဲ့ coatings တွေကို၊ alternative anti-fouling systems အဖြစ်၊ အစားထိုးသုံးစွဲလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ prickles တွေ၊ ထည့်သွင်းထားမယ့် နေရာပမာဏ length and distribution အပေါါမူတည်ပြီး၊ ထိရောက်မှုကွာခြားတတ်သလို၊ သဘေ်ာသွားလာခုတ်မောင်းရာမှာ water resistance လည်း ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့အတွက်၊ realistic option တခုအနေနဲ့ ဆက်လက်သုသေသန ပြုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Reference and image credit to : Focus on IMO, www.imo.org, http://saveourseas.com, http://www.fasterwithseaslide.com/,
Posted by ကိုထွန်း at 04:48